Imikhwa yokujonga i-imeyile iyatshintsha ngokukhawuleza | Martech Zone
Imikhwa yokujonga i-imeyile iyatshintsha ngokukhawuleza
NgoMvulo, Septemba 19, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Le infographic engakholelekiyo evela Litmus ibonisa utshintsho olukhulu kwindlela yokuziphatha yokujonga i-imeyile kunyaka ophelileyo! Ukusuka kwi-infographic:
I-imeyile ihlala ingoyena msebenzi unamandla kwi-Intanethi kwihlabathi liphela. Ngapha koko, abasebenzisi be-imeyile kulindeleke ukuba bafike kwi-3.8 yezigidigidi ngo-2014; phantse isiqingatha sabemi bomhlaba wangoku, kunye nokunyuka okukhulu ukusuka kwi-2.9 yezigidigidi kubasebenzisi abachaziweyo ngo-2010. Apha, sijonga indlela iifowuni zethu kunye nezinye "iithoyi" zetekhnoloji ezitshintshe ngayo indlela esijonga ngayo i-imeyile.
Isicwangciso sokuGcina iWindowsPress… Inye?
I-WordPress rel = "prev" kunye ne rel = "elandelayo"
Sep 23, 2011 ngo-4:44 PM
Inqaku elihle! Umzobo owoyikekayo kunye nolwazi olugqwesileyo, lufundeka ngokulula. Abathengi bethu kwi-imeyileList.net baxela iziphumo ezifanayo ngokusekwe kuhlalutyo lwabo kunye nolwethu ngokunjalo. I-imeyile ihlala inamandla kakhulu okwangoku kwaye ukubona izibalo ezinje kundenza ndiqiniseke ngakumbi ukuba sibonelela ngenkonzo exabisekileyo kubathengi bethu!